खासामा बेचिंदै नेपाली बैंस : Sanjaal Ganthan
January 24, 2013 by Sanjaal CorpsFiled under: Nepal - Sex Prostitution and Social Issues, Nepal Dance Bar / Night Life नेपालमा जस्तो यहाँ पुलिस/आर्मीले दुःख दिदैनन्। आउँछन् हामीसँग बस्छन्, रमाइलो गर्छन्, पैसा तिर्छन् र फर्किन्छन्।
‘यो त सूर्य चुरोट, मलाई खुब मन पर्छ।’
‘म पहिला काठमाडौंको रेष्टुरेण्टमा काम गर्थे, तर त्यहाँ रातभरि काम गर्न पनि नपाइने। कता-कताबाट यता आइयो। यो जिन्दगीको भरै नहुने के दाइ।’
हामीभन्दा दायाँतर्फको कोठाबाट आवाज आयो- ‘नयन! तिमी यता आऊ।’
त्यसपछि सुन्दर अनुहार लिएर आइपुगिन् अन्जू। उमेर त्यस्तै १५/१६ भन्दा बढी छैन होला। ‘अँह, म त रक्सी चुरोट केही पनि पिउँदिन। सानै छु नि त!’ उनी बोल्दै गर्दा अर्की छिरिन्- प्रेरणा।
‘बिस्तारै सिकिहाल्छे नि दाइ, भर्खर एक महिना त भो यो आकी’- तिनले भनिन्। प्रेरणाले बियर खोलिन्, सबै प्याला भरिन् र भनिन्- ‘दाइ चियर्स!’
नेपालीमा ग्याम्बे भने झै एकै पटकमा पूरै प्याला रित्तो पारेर प्रेरणा बोलिन्- ‘यो त खासा हो नि दाई, देश अनुसारको भेष त गर्नै पर्छ। बरु, सिग्रेट सल्काउनु न म त झ्याप भइसकें।’
‘जे पनि पाइन्छ नि दाइ, काँ यो नेपालजस्तो हो र?
एक हजार रुपियाँदेखि रुप र बैस हेरेर १० हजारसम्मको रातबारे सांकेतिक जानकारी दिइन् उनले। ‘चाइनिज केटीहरू त अझ सस्तोमा पाइन्छन् भाउ बिगारेकै तिनेरले’ भन्दै गर्दा सैनिक पोशाकमा चिनिया दुई युवा आए। हामी सशंकित भयौं।
‘डराउनु पर्दैन दाइ, उहाँहरू पनि तपाईंहरू जस्तै ग्राहक हो। मैले भने नि यो नेपाल होइन’, स्वेच्छाले हामीलाइ सम्झाइन्। ती चिनिया सैनिक रहेछन्, केहीबेर नेपाली युवतीसँग बिताउन आएका। त्यतिबेला स्थानीय समय अनुसार रातको दुई बजिसकेको हुनुपर्छ।
‘केही हुदैन दाइ यस्तै हो, बरु क्यामेरा लुकाउनु होला, उनीहरुले देखे भने फुटाल्न सक्छन्। फोटो खिच्न चाहिं चाइनामा गारो छ, स्वेच्छाको सुझाब अनुसार हामीले क्यामेरा लुकायौं।
केहीबेर हराएर आएकी नयनले भनिन्- ‘दाइ नेपालमा जस्तो यहाँ पुलिस/आर्मीले दुःख दिदैनन् नि, ऊ यसरी आउँछन् हामीसँग बस्छन्, रमाइलो गर्छन्, पैसा तिर्छन् र फर्किन्छन्।’
काठमाडौं घर भएकी नयन त्यो बारको पुरानो स्टाफ रहिछन्। उनलाई धेरै जानकारी रहेछ खासाबारे। र, त्यहाँ नेपालका उच्च पदस्थ पनि धाउँदा रहेछन्। तर, अराजक हुन्छन् रे तिनीहरू यस मामिलामा। भनिन् -’चाइनिज ग्राहक त धेरै सोझा हुन्छन्। नेपाली जस्ता उत्ताउला हुदैनन्। भाषा बुझ्न गारो र मात्रै नत्र मजाका।’
‘दाइ यहाँ त चौविसै घण्टा खुल्ला हुन्छ नि। पेशा गरेर पनि खान नपाइने काठमाडौं जस्तो होइन।’ नयनले भनिन्-’उसले चिन्ला कि, काकाको छोरा आउला कि, साथी पो आउली कि भन्ने चिन्ता पनि छैन।’
उनीहरूको दैनिक तलब कम्तीमा तीन सय रुपैयाँ हुँदो रहेछ। काठमाडौका रेष्टुरेण्ट, क्याविन र बारहरुबाट खासासम्मको दूरी पूरा गर्नुलाइ उनीहरु ‘बेस्ट प्रमोशन’ मान्दा रहेछन्। खासाका बार र ५ वटा डिस्कोथेकमा गरी डेढ सय जति नेपाली युवती कार्यरत छन्।
खासा रोडको त्यो मध्ये सडकमा अरु धेरै चिनिया बार र रेष्टुरेण्ट पनि छन्। जहाँ खल्तीमा पैसा हुनेका लागि आइटम-आइटमका मदिरा, रेष्टुरेण्ट, बार, डिस्को र युवती तयार छन्। दिनभर व्यापार व्यावसायमा व्यस्त त्यही सहर रात परेपछि ‘रेडलाइट एरिया’ बन्छ।
सहरको मध्ये चोकमा एउटा डिस्कोबाट गीतको आवाज बाहिरिरहेको थियो- चिया बारीमा..हो……चिया बारीमा…। प्रवेश शुल्क नलाग्ने डिस्कोमा छिरेर एउटा ल्हासा वियर पिउँदा सय रुपियाँ तिरे पुग्छ। बाँकी ग्राहक के चाहन्छ र ऊसँग कति पैसा छ त्यसमा भर पर्छ।
सवैजसो चिनिया अक्षरमा लेखिएका साइनबोर्ड अनुसार नेपालीलाई रेष्टुरेण्टहरुको नाम आउँदैन। यस्तै मध्येको एकमा हामी पुग्दा-युवती पुरुषसँग आलिंगनमा व्यस्त थिए। अनाम चिनिया युवती आएर हामीलाई पनि त्यसै गर्न थाले। पछि थाहा भयोे-नेपाली युवा चिनिया युवतीसँग र चिनिया युवा नेपाली युवतीसँग बढी रमाउँदा रहेछन्। अचेल त्यहाँ नेपाली युवतीको माग निकै बढेको रहेछ।.
Closure Of Dance Restaurants Will Promote Prostitution – Lawmakers Women Singing In Dohori Sanjh Restaurant And Bar In Nepal
Pooja Lama – Another Nepali Actress In Sex Scandal Video Release - 370,993 viewsFree Online E Book Collections Of Paulo Coelho – Read /Download - 90,853 views100 Plus Best Mehendi Henna Design Pictures For Wedding or As A Temporary Tattoo - 58,702 viewsNepali MP3s - 32,771 viewsNamrata Shrestha – The Nepali Actress In Scandal - 30,456 viewsNepali Movie – Sano Sansar – Watch Online [Full Length] - 27,932 viewsGuitar Tabs - 25,733 viewsLyrics – COD Band – Behoshi - 18,960 viewsNepali Joke 19 – Nepali Girlfriend Wears Moms Mini Skirt - 18,816 viewsNepali Joke 20 – Alchhi Nepali Haru - 18,396 viewsLyrics – Aastha – Antim Maya - 17,286 viewsNepali Remix - 16,903 viewsWhat is seen at “Sex Dance Bar” in Kathmandu - 16,294 viewsBar Girls of Kathmandu – By Sudeshna Sarkar - 16,033 viewsCommunity Problem – Teenaged Girls Strip Every Night At Kathmandu Dance Bars - 15,429 viewsSome Nepali Actress Pictures - 13,434 viewsHistorical Pictures Of Nepal  - 13,415 viewsList of Nepali Surnames (C-J) - 13,285 viewsVijaya Dashami (Dashain) and Deepawali (Tihar) Ecards For Free - 12,002 viewsList Of Nepali Surnames (S-Z) - 11,545 views